Iiwebhusayithi ezili-10 apho unokwenza ipotifoliyo yakho ikhawuleze, ibe lula kwaye isimahla | Izidalwa ezikwi-Intanethi
UManuel Ramirez | | Uyilo lwewebhu, Izibonelelo, Ezahlukeneyo
Nawuphi na umyili ibaluleke kakhulu yibane ipotifoliyo ekwi-intanethi ngemisebenzi yabo apho kunokwenzeka khona umthengi ungawubona umsebenzi wethu kwaye unxibelelane nathi, siqeshe kwaye umsebenzele.
Eyona nto ifanelekileyo kukuba ne- Indawo yewebhu yegama lethu okanye igama learhente yethu okanye iofisi yoyilo kwaye ubambe ipotifoliyo yethu apho, kodwa ukuba awunalo ixesha, imali okanye ulwazi oluyimfuneko lokuyila ipotifoliyo yakho, zininzi iiwebhusayithi apho lo msebenzi ulula kuthi.
1 Ngaba kubalulekile ukuba neephothifoliyo?
2 Iiwebhusayithi ezili-10 zokwenza ipotifoliyo yakho simahla
2.7 Ibhokisi yepothifoliyo
Ngaba kubalulekile ukuba neephothifoliyo?
Izinto zitshintshe kakhulu xa kufikwa ekufumaneni iphothifoliyo apho sinokubonisa khona ubugcisa okanye ubugcisa esenzayo. Sitsho kuba enkosi kwisantya sonxibelelwano esihle kunye nezixhobo ezahlukeneyo, ukwenza ipotifoliyo yakho ikhawuleze, ilula kwaye isimahla ngoku inokwenzeka ngendlela elula.
Sithetha ngesantya sonxibelelwano kuba siyasivumela ukuba sivelise umxholo wobulunga obungcono, isisombululo kunye nokulayisha iividiyo. Kodwa masijongane nayo, kwaye siza kukubonisa iindawo ezili-10 apho ungafikelela khona yenza iphothifoliyo yakho kwaye ubonise abathengi kunye neenkampani ekufumaneni konqakrazo kwikhonkco lakho.
Iiwebhusayithi ezili-10 zokwenza ipotifoliyo yakho simahla
Siqale ngo-Behance kuba yegcisa loyilo, lokuzoba, umzekeliso nangaphezulu, yindawo ebalulekileyo apho kufuneka ube ngu-ewe okanye ewe. Iphantsi kwesambulela seAdobe, ke ukuba uneakhawunti yeCloud yokuDala, ungayila ngokuthe ngqo kwiFotohop ukudlulisa indalo entsha okanye iprojekthi eya eBehance ukuze nabalandeli bakho balandele ukuhamba komsebenzi emsebenzini okanye kuthotho.
Ufuna ixesha ukuze ube nabalandeli, kodwa njengakwezinye iinethiwekhi zentlalo, ukuthanda, ukulandela kunye nokukhangela abo basilandelayo, siya kuba nakho ukuthatha inxaxheba kwindawo encinci yamagcisa ngexesha elifutshane. Unayo simahla ngeakhawunti yeAdobe, ke ayinakuba lula. I-interface igqibelele kwaye inomdla kakhulu ukushiya iphothifoliyo epholileyo.
Okunye yezona zithuba zibalaseleyo zamagcisa kwiwebhu kwaye apha, nakwi-Behance, sinokwabelana ngesiza kunye neengcali kunye nabaphengululi abaqala ukuzoba, ukuzekelisa okanye nentengiso.
I-DeviantArt iyasivumela unephothifoliyo yasimahla ngokupheleleyo kwaye oko kunokubonwa ngamakhulu amawaka abasebenzisi abanale nethiwekhi. Inye yezo zihlala inani elikhulu labasebenzisi, njengangaphambili. Ifomathi yayo inobugcisa obuncinci obuncinci kwipotifoliyo, kodwa yindawo ekufanele ukuba uzimisele ngayo malunga noku. Ukuba uphatha isiNgesi okanye olunye ulwimi, konke kuya kuba ngcono.
Flickr yayihlala inxulunyaniswa nokufota, ke siyishiyela abo bazinikelayo kweli sebe. Enye yezona zinto zinokwenzeka kakhulu linani elikhulu lezithombe onokuzilayisha kunye nolwazi lwe-ESIF olubonakala kwifoto nganye. Oko kukuthi, banokwazi i-ISO oyisebenzisayo, inqanaba lokuvezwa kunye nazo zonke ezo datha zibalulekileyo zeefoto.
Nangona kunjalo iwebhusayithi ezinikele ekufotheniIifoto zakho zinokumakishwa njengezobugcisa okanye imifanekiso, ukuze ufumane abathengi. Kodwa ndathi, yindawo enkulu njengephothifoliyo.
Enye yezona ndawo zibalaseleyo zokubonisa iphothifoliyo yakho. Nangona zininzi iintlobo zeendidi zobugcisa, zikwinqanaba ledigital apho iDrumbble ibeka isandi. Ingxaki kuphela okanye ukukhubazeka kukuba ube nendawo yakho yokulayisha ubugcisa bakho ufuna isimemo. Ayikho enye indlela yokufikelela ngaphandle kokuba silandele iakhawunti kwi-Twitter kwaye sinikele ingqalelo kwizimemo.
Ngale ndlela benze i Uluntu olwabelana ngezimemo kwaye le yindlela yakhe yokufika ukuza kuthi ga ngoku. Olunye loluntu lwegcisa oluphambili kwintengiso yedijithali kunye noyilo okanye umzekeliso. Ungaphoswa kwaye uzame ukufumana isimemo. Ungasoloko ubuza isangqa sabahlobo bakho ukuba bayamazi umntu.
Esi sisombululo asisesinye sezona zilungileyo, kodwa sifuna ukuba nendawo ye-Intanethi ekwiakhawunti yasimahla esinokuba nayo. Nangona asinakubonwa Ngaphandle kokuba sidlula ebhokisini. Ngamanye amagama, sinokuseta ipotifoliyo yethu yasimahla kwaye ukuba siyabona ukuba siyayithanda indlela iqonga elibukeka ngayo, sinokufikelela kwizicwangciso ezintathu eziza neCarbonmade.
Kukho ezenzelwe $ 8 ngenyanga ngeeprojekthi ezisi-8Iiprojekthi ezingama-50 ezili-12, kwaye sele ziyi-18 zeedola ngenyanga ukuba zibe neeprojekthi ezingapheliyo. Bathumela iiprojekthi kubugcisa obulayishiwe. Enye yeenzuzo zayo kukuba ibonelela ngamava amnandi kakhulu kwipotifoliyo ekunganyanzelekanga ukuba sizitye iintloko zethu.
UmxholoForest yi portal ngamawaka emixholo yee-CMS ezahlukeneyo. Phakathi kwabo i-WordPress kwaye esivumela ukuba singene kwimixholo ezinikezelweyo yeengcali kunye namagcisa. Oko kukuthi, kukujonga efanelekileyo, uyihlawulele ubuncinci be-euro ezingama-20 ukuya kwi-30 kwaye siya kuba nomxholo olungele ukufakwa kwiWordPress.
Ezi zihloko bahlala beza nezifundo ukushiya iwebhu ilungile kunye neephothifoliyo yethu kwaye sinokushiya okuseleyo silungiselele ezinye izinto. Njengoko bekutshiwo ngaphambili, kuya kufuneka uphathe iWindowsPress kancinci, ke ngexeshana elincinci unokuba newebhusayithi enobuchwephesha kunye ne-url yakho, i-imeyile yokusebenza kunye nokunye. Oku kuhlala kunika ubuchwephesha ngakumbi kulo mbandela kunye nokwazi igcisa eline-url kunye ne-imeyile yakhe kunika into eninzi kwizivumelwano ezinokuthi zisize kuthi.
Esi sisombululo inomdla kakhulu kuba isimahla. Kuza kunye nokhetho lokongeza iifriji zemifanekiso, ibhlog kunye ne-domain esimele siyenze ngaphambili kwisivumelwano sokubamba. Zinexabiso eliphantsi, ke baya kusivumela ukuba sisuke ekufakweni kweWordPress kunye ne-url ene-imeyile kunye nabanye.
Eli qonga liza kukhathalela okuseleyo, elivela kumhleli walo wewebhu likuvumela ukuba wenze iphothifoliyo enobungcali ngomsebenzi omncinci kunezisombululo ezibini ezichazwe apha ngasentla. Ungayibona imizekelo yewebhusayithi ezenziwe kakuhle. Kwaye sicebisa ukuba uqeshe i-domain nge-imeyile ukuze uyise kwelinye inqanaba. Indawo enomdla apho sinokuthi hayi xa sifuna ipotifoliyo yasimahla. Nkqu Nge-url yakho ungasinceda siphume enkathazweni kwaye usibonise kwi-Intanethi ngaphandle kokuchitha i-euro.
Elinye iqonga zinikezelwe kumagcisa kunye nobuchule bokuyila kwaye oko kusivumela ukuba sibe neepotifoliyo yethu kwi-intanethi ngokulula kwaye simahla. Eyona nto ibaluleke kakhulu, inezicwangciso ezininzi ezinokuthi zilungele iphothifoliyo yethu. Inkululeko ibandakanya indawo yayo kwaye sinokuyivavanya ngoku.
Ukuba sele sifuna ukuya kwi-9 euro ngeplani yenyanga, siya kuba nesizinda simahla sonyaka wokuqala kwaye ngaphandle kwentengiso. Ngamanye amagama, uya kuba nephothifoliyo yasimahla, kodwa khumbula ukuba uza kubona intengiso. Kwaye oku ukuba kungaphazamisa amava alo mthengi oza kukubona ukonwabela ubugcisa bakho. Intengiso ihlala ibuyela umva.
Sigcine i-Etsy ngesizathu, kuba yindawo efanelekileyo njengepotifoliyo yabo bathengisa izinto, ubugcisa okanye nokuprintwa kobugcisa bakho. Iakhawunti yakho yasimahla isivumela ukuba silayishe olo bugcisa kufuneka sithengise. Ngamanye amagama, kufuneka sibeke ixabiso kwizinto zethu. Oku kunokubuyela umva, kodwa ukuba uyathanda ukwenza iminqwazi eyahlukileyo kuyilo lwakho, akukho ndawo ibhetele kune-Etsy yokubonisa ubugcisa bakho kwaye uyithengise.
Ukuba uphatha isiNgesi ungafika apho kwikona nganye yale planethi apho kukho i-intanethi. Kwaye ukuba wenza imizobo engabonakaliyo, unokufikelela kubathengi abaninzi abafuna umzobo owahlukileyo uyilo olukhethekileyo lwasekhaya. Isenokuba nguwe, ngenxa yoko sele ulahlekile lithuba lokubeka ubugcisa bakho kwi-Etsy, uyimakishe kwaye ube nomonde wokwazi abanye ukuba bathethe ngobugcisa bakho.
I-Instagram yintanethi yenethiwekhi, ewe. Kodwa singayisebenzisa njengepotifoliyo kwaye ke ukufikelela amakhulu ezigidi zabantu. Ngapha koko, i-Instagram mega isetyenziswe ngamawakawaka amagcisa. Babeka ulwazi lwabo, ifoto yelogo yabo emva koko kwenziwa isithuba ngasinye ukubonisa nganye yemizobo yabo, imizobo. Okwangoku inokusetyenziswa njengevenkile ye-Intanethi ukuyithengisa. Ukufumana enye inri, unokubeka i-carousel yefoto ukubonisa ukukhula kunye nobuchule Yiza, lelinye ithuba elihle lokubeka iphothifoliyo yakho kwaye ufikelele kuninzi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ezahlukeneyo » Iiwebhusayithi ezili-10 apho unokwenza ipotifoliyo yakho ikhawuleze, ibe lula kwaye isimahla
UOlivia R. Orduña sitsho
Molo, ngaba kunokwenzeka ukuba uyazi okanye unayo i-tutorial ye-wordpress? Bathi ilunge kakhulu, ilula kwaye ayibizi, kodwa njengoko ingeyiyo i-php okanye i-css ayisiyonto yam, ndiyenza nzima kakhulu: / imibuliso, ibhlog enkulu.
Phendula uOlivia R. Orduña
Molo, unjani?, Ipotifoliyo inokusetyenziselwa ukupapasha imizobo eyenziwe ngezandla okanye hayi?
Molo ufumana njani okanye ukwenza ipotifoliyo kulula kakhulu
Molo, unjani? Kulula kangakanani ukwenza ipotifoliyo nantoni na?
Iwebhusayithi yakho yezoqoqosho sitsho
Enkosi kakhulu ngegalelo! Sele ndibandakanye ipotifoliyo kuninzi lwezi ngcebiso uzenzayo kuthi. Ndilixabisile kakhulu ixesha olichithe kuphando ngezi ndawo kwaye ndiza kujonga ezinye izithuba. Ndiyakuvuyela kwiblogi, kulungile! Imibuliso evela eMexico
Phendula kwiwebhusayithi yakho yezoqoqosho
I-Remix 3D ekugqibeleni iza kukhutshwa nguMicrosoft
Imizekelo engama-50 eNkulu yoYilo lweFilimu